Vuka Book kucatshulwe: 7:00 A.M. ingqiqo — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Vuka Book kucatshulwe: 7:00 A.M. ingqiqo
Ndandineminyaka elishumi elinesihlanu ubudala kwaye ziyajikiswa ubomi bam ngaphakathi ngaphandle. igama lam ukubonakala ayizange iguquke, kodwa yonke enye into ngam kwafuneka. Ndaba ngumntu eyahlukileyo ngokupheleleyo kunam yayikade nonyaka okanye emibini ngaphambi. Andizimisele xa abantu ukuya ekholejini nokuphinda-ukudala ngokwabo kunye lweziqhulo ezintsha kunye nobuntu; Ndiya kuthetha into ebalulekileyo eye kwi ngaphakathi kwam. Ndiye ndaba ngumKristu. Ndaziva olutsha. Ndaziva ephila.
Ndikhathazeke okulungileyo kwafuneka ukwazisa ukuba nabani na ababephulaphule, ingakumbi abahlobo bam abasenyongweni nosapho. Wonke basabela ngeendlela ezahlukahlukeneyo xa utshintsho kum-ezinye ngovuyo, abanye ukuxhathisa-kodwa incoko omnye uye wema kum.
Bendithetha nendoda endala ngaye mna ngenxa yokuhlonela kakhulu, bavuyiswa ukubachazela isicwangciso yam yomdlalo imbeko uThixo yokuphila wam, ngokukodwa ubunyulu yam yesini. Ndazama ludambe ngayo, kodwa soloko kunzima ukubamba yimincili yam. Njengoko amazwi yatsiba elulwimini lwam ngesantya nemvelo, Ndinayo ngengqiqo ukuba nemincili wayengekho njengoko. Yayifuna ukuba siphulaphule, kodwa ibinzana yobuso bakhe waphendula phambi emlonyeni wakhe waba ithuba. Wayebonakala esithubeni bahleke kwaye gabhu ochaphazelekayo.
Wandinika ujongo edidekile ngokuzolileyo wabuza, "Kutheni na ukuba uthatha kangangokuba ubomi, indoda encinci? Yini na ukuba nifune nzima ukwenza yonke into elungileyo? ixesha Youth kuxa ukuchitha kakhulu, kwaye Akukh'onto. nandipha nje wena, ukufunda ezo mpazamo, kwaye ufumane enkulu xa ekhula. "
Ndadana. Abanye lwalunokuthabatha ukuba icebiso njengoko iyakhulula nangokunyaniseka, kodwa ukuba akukho indlela awayevakalelwa kum. Ivakala ndibanyanzela, belahlekisa. Ndandisazi ukuba uthe engalunganga, kodwa ngumKristu entsha kwaye ndandingakwazi awuyifumani ubeke oko amazwi.
Ndacingisisa loo mava ixesha elide, kodwa endaweni dampening komlilo yam, Ndicinga ukuba Ndajika ke ebushushwini. Ndandingazi kakhulu ngexesha, kodwa ndandisazi ukuba ukuhlala ngeenxa nje ulinde. Kwafuneka ukuba aze aphile.
Ingqiqo YETHU olunemposiso
Uvuka yam yinxalenye okungenani ndiyithandayo yonke imihla. Yinto ukuba andiyi sikuxabisa usuku olutsha kunye namathuba amatsha, kodwa kokuphakama ebhedini nje Alikhe nomtsalane. kuze. Xa ke elinanye ebusuku, ukufumana ebhedini nje kuyinxalenye eqhelekileyo usuku lwam. Kodwa xa ke ezisixhenxe kusasa, wayehlala ebhedini kufana ngokuphumelela ilotto.
Ukuba ujonga iPhone yam, uzakubona ukuba, ngelishwa, Mna malunga elinesithandathu alarms kwi imizuzu-elinesihlanu ukuqala nje phambi 7:00 a.m. Ngoba? Kuba akukho intle kakhulu akukho ithuba ndiza kuvuka emva alarm weshumi. Ezo amanani amathathu-elandelayo elinesine, Shumi elinantlanu, aneshumi-na ithuba yam kuphela okunene imini.
Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba mna ngokwam kunokukuqinisekisa nto ngezo imizuzu yokuqala wozelayo kwentsasa nganye. Oku umandundu iminyaka yam kwikholeji, xa ndandinyuka ebhedini kusasa waziva ngathi banyuka eNtabeni Everest ngaphandle imilenze. Mna ndithi mna zonke iintlobo ubuxoki, ezifana, "Ewe, kufuneka uye eklasini, kodwa uya ngokwenene into?"Okanye" Ndiyazi ukuba ubukhe emva kwexesha yonke imihla iiveki ezintathu zokugqibela, kodwa into enye imini?"Okanye" Mhlawumbi umhlobo wam uza uvavanyo kum. Kubangel 'umdla umngcipheko. "Okubuhlungu, Ndiyazi. Yiloo nto ndiya kubiza 7:00 a.m. ingqiqo.
Ubuxoki ndamxelela ngokwam ukuba wayehlala ebhedini kuba kulungile kum. Ngandlel imizuzu chatha emihlanu okanye iyure kuza kuphucula ubomi bam. Xa uthe qwa kubonakala bubudenge, kodwa ngezo zihlandlo lokuqala ngosuku ngalunye kubonakala kusengqiqweni ngokugqibeleleyo.
Ngaba unokuyithelekelela into kuba njani ukuba akukho mntu wavuka ihlabathi de ngokungathi? Amashishini uya kuwasonga, izikolo ubunzima, urhulumente kuba ingalawuleki ngaphezu Sele. Akukho mntu uya kuba nexesha elaneleyo ukwenza kakuhle umsebenzi wakhe; ngexesha wonke ndivuke, isiqingatha imini kuba nanto. Inyaniso, kungakhathaliseki ukuba ixesha ugqiba ukuba avuke ubuthongo yakho, kufuneka nje iiyure ezingamashumi amabini anesine ukusebenza. Bakubethe lokuphumla iqhosha akuthethi okunene ikuthengele naliphi na ixesha elongezelelweyo. umsebenzi wakho nje akayi ibinokwenziwa.
ngelishwa, abaninzi bethu yamkelwa 7:00 a.m. sengqiqweni njengendlela ubomi. ngamanye amaxesha esiyibiza ukuba amangomso. Asazi uziva ngathi ukwenza into mzuzu, ukuze sigqibe ukuyicamagushela kube kamva. Ngamanye amaxesha oko ngezinto ezincinci, ezifana nokukhwela kuchitha inkunkuma, abafundela uvavanyo, Waphendula umsebenzi e-mail, okanye ababuya ndikumama umnxeba.
Kodwa amangomso akuthethi okunene ukusombulula nantoni, ngoko ke loo nto ayifanelekanga ukuba yokulibazisa imisebenzi yonke imihla de kube ngumzuzu wokugqibela. Yeyona uluvo ngakumbi yokulibazisa nobomi.
Makhe sinyaniseke. inkcubeko yethu abadli silindele lukhulu abantu bade bacinge endala. (Ndiza ukuphepha ukukhubekisa nabani kwaye kuvumela ukuba uchaze endala.) Ngokutsho ezininzi, ulutsha asiloxesha imbopheleleko enkulu okanye ukulindela. Bathi, "Uya kuthwala imithwalo uxanduva ubomi bakho, gqitha ulutsha yakho ngexesha u nga!"Abantu ngathi ukulindela ukuba zonke zobomi njengento side sifikelele ukuba bomlingo, ubudala esicalanye uxanduva. Ingaba elinesibhozo? Ingaba ezingamashumi amabini ananye? Ingaba mathathu? uqikelele ziyafana am.
Ndibene incoko yiweyitala Phoenix akukho ubusuku enye ixesha elide eyadlulayo. Yena omncinane kakhulu kunam, mhlawumbi kwi kumashumi yakhe yokuqala. Wayenobubele ngokwenene ukusuka mzuzu ndahlala phantsi, kwaye Ndagqibela ngehambo entle. Ndathi kuye yonke imibuzo ezincinane-ntetho njengesiqhelo: Uvelaphi? kuba njani ixesha sebenza apha? uya amathe ukutya kwam?
Njengoko waphendula imibuzo yam, kwacaca ukuba Ebeza wathenga kwi 7:00 a.m. ingqiqo. Wandixelela ukuba wayehlala kuphela Phoenix iinyanga ezimbalwa. Phambi kokuba lowo waba Nevada, phambi kokuba California, yaye phambi kokuba wahlala phezu East Coast. Ngeli xesha ndaqalisa ongaphumiyo ndingathanda achaza ngayo ukuba umzobi ngesimo samapolisa, kanye xa wayezimele ezithile uhlobo.
Kodwa xa ndambuza ukuba kutheni wafudukela ngeenxa kangaka, nantsi into wandixelela: "Kuba u. Andifuni ukuhlala kwindawo enye uthabathe kwi qela uxanduva. Ndicela umfana, indoda. Nto ixesha lam ukuphonononga nje, akayi zixinge phantsi iqelana izibophelelo. Ngubani owaziyo, mhlawumbi ndiza kufumana ngokwam. "
Ndaba buhlungu, kodwa akamangaliswa impendulo yakhe. Kunjalo akukho nto iphosakeleyo uhambisa kakhulu okanye self-ukufunyanwa, kodwa kukho nomzuzu kumashumi-okanye zethu ekuqaleni zethu elivisayo-xa ubomi asingeni umcimbi? Ngaba simele myekeni zonke yeenkolelo, izibophelelo, nokundileka de kamva?
NGABA UNOKUWATHEMBA IT?
Ndeva ingoma enye kwimini ayithimba le mbono ngokugqibeleleyo. The lyric waya, "Sicela banoyolo, khulula, abaqiniseki, kwaye ndililolo ngexesha elinye. "
Ndiyazi ukuba usithabathile phezu Taylor Swift akaphumanga kakuhle abantu mandulo (kufuneka mna, ukuze uzikhumbuze ukuba Kanye?). Kodwa mna ndikulungele ukuthatha umngcipheko kwaye sihlolisise oko uthi ingoma yakhe "22." Ndiyazi ukuba nje ingoma emnandi, ngoko andifuni ukuba overanalyze kuyo. Ndicinga ukuba sele kuthinjwa ngempumelelo iimvakalelo abaphulaphuli bakhe kunye nomoya ubudala. Kodwa izinto zonke engalunganga.
Ingaba ithetha ntoni, njengoko ithi ingoma, "bazive amabini anesibini"? Le ngoma ibhiyozela uhlobo ungakhathaliyo, ukukhanya, kwaye yokukhulela lula ukuba abaninzi kuthi waphupha malunga. ngelishwa, icebisa ukuba olu yolo nenkululeko ifumaneka bedidekile, neyokudinga amaxesha ulusizana. Akukho icala, Akukho mnandi uxanduva-kanye ingalawuleki. Yilaa 7:00 a.m. sengqiqweni kwakhona. Ngubani na ixesha xa uziva ezingamashumi amabini anesibini? Swift akazange enze le mbono ukuya; siye bekuthengiswe le logic ngapha nangapha kwakhona. Kodwa oko inokuthenjwa?
Nokuba kukanjani eli 7:00 a.m. isisibakala onokuthenjwa kuxhomekeke ukuba ungubani na nokuba yintoni na zadalwa ngenxa. Ukuba zadalwa kuphela self-ulwaneliseko nolonwabo, ngoko ukuhluba ubomi benene de kamva isenokuba khetho. Ukuba akukho ngaphezu komnye umntu ejonga ngokwakho, ngoko sengqiqweni ukuba weyitala mfana kunokubonakala isandi intle. Ungalinda de kamva baqonde ukuba ufuna. Kodwa kuthekani ukuba zadalwa into engaphezulu?
*Oku indawana ukususela kwisahluko sokuqala incwadi entsha Uhambo ngayo, phakama. Sukulibala, xa phambi-order Rise ngokuthi EyoMqungu 26, uza kufumana iqelana izipho simahla, kuquka nomzila ibhonasi esingayilungisanga phezu album. Yabona, bonke bephela iinkcukacha ngentlawulelo izipho zenu: http://risebook.tv/preorder
iqhosha • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 1:18 pm • impendulo
Bulelani Woow alot uMnu Trip Lee kule… Ndenza esi sigqibo ngenxa 2015 ukuba zonke ebusuku ndiya kuvuka phezulu 3 yaye ayinyaniso Ndisoloko ndivuka kodwa mna awuqinisekanga ndithandaza Ndidla ngokwam ndikuthuthuzele ngokuthi unyaka uselula I mean abantu nangoku ekuthumeleni ukubingelela ezintsha owonwabileyo nyaka ndicinga ukuba mna nje 20 makhe linda xa am 30 uze ube nentsapho, kids, umsebenzi kunye nomyeni mna ndiya kuba alot ukuba bathandazele… Makubulelwe ke le piece njani Akwaba ungafumana yonke le ncwadi izandi ulwazi kakhulu. .. kunjalo UThixo anisikelele !! :-)
Yolanda Delacerda • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 1:31 pm • impendulo
Oku nakanjani ndingubani NGOKU! Ngelishwa, kodwa akukho mfuneko yokuba ukufihla. Mna ongenamyeni, ungumfundi osisigxina, ube lwamashishini amancinane, okwangoku inkokeli intonga icawa ngokutyala ngoSeptemba 2014 (abasebenzi zokulala), kunye nexesha umsebenzi wesingxungxo kwikhaya ekhuselekileyo amantombazana elivisayo abo amaxhoba okurhweba ngesondo kunye yes nasemva kokufunda into andikwazi mna Ndiqinisekile ukuba sele ediniwe! Ndinobuganga nam qho ebusuku phambi kokuba alale ukuba bavuke ubuncinane yi 5:00 a.m. wamisa zonke alarms zam ..(yes ZONKE I mean ezintlanu phone yam ke leyo eye uqhagamshelwano)ukuba njalo 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, kwaye 6:45…Ucinga ntoni ixesha ndivuke namhlanje?!? 7:00!!! Ewe, Ndiyazi mna lazy kakhulu… Kodwa ngokwenene mna ndidikiwe…mhlawumbi kakhulu epleyitini, ndiya kwenjenjalo nam ukunciphisa ezinye izinto phantsi ngoku, kodwa ekugqibeleni iposi yakho Kuliqiniso. Bendiya kuba indlela nemveliso ngakumbi zonke Ndiyavuya ukubandakanyeka, Okubaluleke kakhulu ke ukuba ukunika ixesha ngakumbi uThixo. Indlela uyaganga ngokwenene ngayo ukuchitha ixesha ezixabisekileyo ezifana. Njenge 25 umnyaka ubudala( ndingu 25) okanye njengoko 30 okanye 40 nyaka mnye nathi kufuneka yonke imihla abaphila njongo ngenxa yokuba sinawo omnye, ukuba siphile yonke imihla kungachithwa yaye ukwabelana ilizwi lakhe aze amkele umzuzu zonke kunokwenzeka ukuba zikhule kuye ebomini bethu yonke imihla. Enkosi ukwabelana nokukhangela phambili kwikonsathi yakho eOrlando!!!
baguqulwa • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 1:45 pm • impendulo
Esi sithuba kwafika ngexesha ogqibeleleyo, njengoko ngesigqibo wam omtsha wayeza wawohlwaya ngaphezulu, kakhulu ngokukodwa ukuba uvuke kusasa, kuba iLizwi yonke imihla ukuze ubomi bam lihlala uguqulwe ngu kuyo. Siyabulela ukhuthazo!
Ngaba • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 1:59 pm • impendulo
UThixo ulungile. Kwiiveki ezidlulileyo phambi kokuba isikolo siqale wabuyela ngenxa yam 5 konyaka ubudala waza wabuyela ekhaya ube kunye nomama wakhe leeholide (nokuba ihlobo) imiso yonke yayo 'Ndiza ndivuka 20 MINUTES,’ okanye nantoni ibhaxa inokuba kwaye betha i lokusnuza iqhosha. Man phambi Ndavuka umsebenzi ndandisele izicwangciso imini yam buphela kunye nam aqiniseke ukuba kutheni le ubuthongo eyongezelelweyo iza kunceda kodwa lonke ixesha elinye ngayo buhlungu ndihlale ebhedini kunokuba uncedo. A lot kwenzekile 2014 kwaye ndakubetha rock embi ezantsi! I Ndinombulelo nje uThixo undibonisile inceba yakhe nobabalo ukuqhubeka nobomi bam kwaye uqale kwaye ufumane injongo anayo ngam kulo mhlaba, kuba andikulingene ukuba. Ukuba ngaphezulu kwaye zifune ukufunda ilizwi kunye nokuqonda iNkosi yethu, uMsindisi uYesu ilizwi akaphangeli isixelela ukuba uwonke, ubuthongo, etc. bonke iya kukhokelela ubuhlwempu, ibhadi, kunye nokufa. A lot of sisono kukhathaza ubomi bam nokuba amavila, siyanda ukulala eyongezelelweyo omncinane indixhase umva ukusuka kubomi uThixo kum. Kwezintsuku ndivuke 20 okanye 30 imizuzu phambi ekuphakuzeleni kwam, uve ukuba ilizwi endixelela 'sivuke uqale ekuqaleni', okanye emsebenzini 'musa ukubeka oku ngaphandle kuyenza ngoku, iinzame zethu wenzani singenza ngcono yakho.’ Ndiwulwile uYehova elide kakhulu yaye Endingakuboniyo ukwenza izinto ngendlela wam uza ukubeka kum kwingcwaba ekuqaleni. Ndiseyilaa andinandawo ndiya Ndinqwenela ukuba kodwa baye bafunda ukuba ndiyanikezela ngomoya nje ukuphulaphula noba yintoni mna walijika ke leyo endandiyikhuthalela ukuyenza kodwa ndiqinisekile zabantu yaye ndinazo siyanibongoza ukuba babuyele iindlela zam. Ndiyoyika yokwenza uThixo phantsi, Andiqondi ukuba ndiza kuyifezekisa injongo yakhe ngendalo yam, ewe mna ukwenza ngcono namhlanje okanye ngoku, kodwa Ndiya kukwazi ingqinelane imihla imini lonke uThixo azimisele ukwenza inxalenye kwam njengomKristu. umdla Its ukufunda yaye bafunde kodwa mna kuye eyoyikisayo ukuba ucinga ukuba ungenza ukwenza oko uThixo afuna ngendlela kwaye Ndibuyela ndiza kufumana kunye ya uThixo ngomso kuba messed up namhlanje. Umuntu umhlobo wam Undityhale kudala ukutshintsha oko ndimamele kwaye ndiyathembisa nje ndaqalisa ukuphulaphula kuwe uhambo kangangeveki ngoku yaye sele uye kwaba nempembelelo ubomi umntu wam. Ndiyayibulela uxolo sithuba elide nje gotta ndithi ya enkosi umculo wakho kunye ngcali ngaphezu kokuba zonke nongeze ubungqina yam ukuba uThixo ukho yaye nangona ndiziva ndililolo ekubeni ubawo single apha kule meko enkulu Georgia nge abantu abaninzi kangaka, UNkulunkulu asebenze nabanye nokuba andiwaboni iingalo ukufikelela okanye akanakuze ahlangane em yitshintshe nam kwicala elililo.
Leonel Arce • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 2:35 pm • impendulo
artist onesiphiwo umzalwana wam wakho ndikhangela kuwe I'm25 uza kuba 26 oku ke ndiyathemba UTHIXO usebenzisa nam ngendlela amagorha LUZUKO bakhe nobutyebi plus i angathanda ukwenza izinto kunye nezinye igcisa ukwenza kushumayela iVangeli ngendlela ukuba ayenzi isandi kangaka yonqulo abantu bajike uze uhambe kodwa kuvuselelwe kwaye uguqulwe kwaye itshintshwe ukuze ngcono ngokuba ilizwi elingaphakathi uthetha phakathi kwethu ukuthetha kwabo phandle phaya, kukho abo bafana nathi befuna injongo yethu koko UTHIXO ufuna neemfuno kuthi. Enkosi ngokwenza le ncwadi ungakwazi ukulinda kusithabatha ndiza ziqala ukuba ndiyayithanda sele!
Joel • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 3:28 pm • impendulo
“Ukuba ujonga iPhone yam, uzakubona ukuba, ngelishwa, Mna malunga elinesithandathu alarms kwi imizuzu-elinesihlanu ukuqala nje phambi 7:00 a.m. Ngoba? Kuba akukho intle kakhulu akukho ithuba ndiza kuvuka emva alarm weshumi. Ezo amanani amathathu-elandelayo elinesine, Shumi elinantlanu, elishumi-na ithuba yam kuphela okunene imini.”
haha. Yinyani leyo. Mna le ngxaki efanayo. Izinto ezintle. Ndijonga phambili ukufunda incwadi!
John • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 4:03 pm • impendulo
Oye. Ndakubetha lo lokusnuza iqhosha ukuze amaxesha amaninzi kakhulu. Ndifuna ukuphila ubomi obalatha unguThixo olungileyo. Ndifuna ukuba uthandaze uze ufumane icebo kungekudala. Enkosi, TL.
holli Simpson • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 4:46 pm • impendulo
Kuhle! ulalele & ovumelana & behleka. Enkosi!
Valentin • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 5:39 pm • impendulo
Ndifuna le ncwadi. Kungenxa kum 18 iminyaka rapper ubudala christian bakuvela kwelaseMakedoni.
uJoanna • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 9:54 pm • impendulo
oku kuyinyaniso kwaye profound. Ziye ulwa 7:00 a.m logic ingakumbi ukususela ekuqaleni eyunivesithi apho kuye kwayinto nzima ngakumbi ukuba zivuke ngexesha.
Carl • EyoMqungu 8, 2015 ngexesha 10:41 pm • impendulo
ubungqina bakho uhlobo indikhumbuza ngokwam xa ndandiselula! ewuthanda ngombono wakho malunga LIFE!!!
Melyssa • EyoMqungu 9, 2015 ngexesha 3:28 mna • impendulo
Efrayimi ukuba uyadlala, Kwafuneka ukufunda eli kakubi kangaka ngoku. Obuyenza ndakufika ndicela ukulungele ukuya kwilizwe eyahlukileyo kangangonyaka ukwenza kwimisebenzi uze uxelele abantu UYESU, Ke imihla ezikhokelela ukusishiya yam (leyo ngoku nje 9,) ezintle zazala ziinqwelo kum 7:00am logic. Le nto, nangona, ngaloo ntsasa nganye xa musa ndivuka kwaye ekugqibeleni belele ngokupheleleyo kakhulu emva kwexesha, Ndiyacaphuka ukuze ndize! Ndiyazi ukuba oku 7:00am logic, kodwa mna Akulungile nayo. I nje abazi ukuba benze ntoni ukuze ukuyitshintsha. Kubonakala ngathi nokuba xa ngokwenene uzame njani, I nangoku nakanjani. Siyabonga ukubhala le, uhambo. I am umngeni.
BungansaPaul • EyoMqungu 9, 2015 ngexesha 7:11 mna • impendulo
Wowu, i love le soo kakhulu. Akwaba ukufumana incwadi.
Brian Anthony • EyoMqungu 10, 2015 ngexesha 2:24 mna • impendulo
Makabongwe uThixo! Ayikwazi ukulinda ukufunda incwadi yakho entsha… Kutshanje kuye esinye yintliziyo ku 9/29/14, ndaza ndambulela uThixo imihla intsikelelo yakhe, ngokubona kwami, efana encwadini yakho yokugqibela ye “Ubomi obumnandi” sikholisa ukuba okanye ithemba lakhe nothembe kwizinto ezingalunganga.. inkosi ikusikelele! #Unashamed #116 #DontQuit #CantwaittoreadRise
Domeanica • EyoMqungu 12, 2015 ngexesha 5:40 pm • impendulo
Enkosi ngokundivumela ukuba singene le ngcali kwi ncwadi yakho entsha. Ndiyakholwa oku uyabukhanyisela inkcubeko yethu nokuba uqale ingxoxo. Ndiyazi amanye amaKristu abancinane neziya kakhulu lo mbono ngokunyaniseka ngokunjalo. UThixo akusikelele uthandaze nto, kodwa iintsikelelo kulo mzamo.
Burton • EyoMqungu 12, 2015 ngexesha 6:23 pm • impendulo
hmmm, 7:00 am logic… Andikwazi ndithi ndiza abayithandi le! Ukufunda le kwandenza ndacinga emva onke amaxesha ukuba ndivuke, khangela ngexesha, uthi, “6:00? Ndicinga isigqibo sam wokuqala wosuku uza kuba… ukuba babuyele ukuze ndilale.” I ubuthongo bam! bangazinikeli, kodwa musa ukuphazamisa me. Ndingathi kunokuba, “6:00? Ndicinga isigqibo sam wokuqala wosuku uza kuba ukufunda iLizwi likaThixo size sithandaze.” Ndiyabulela UHAMBO ngokwabelana le. Ngoko ke yimincili ngenxa incwadi yakho, Ndikhe kakade pre-odolwe it!
josh • EyoMqungu 13, 2015 ngexesha 11:20 pm • impendulo
Unamandla izinto Uhambo. Enkosi ukwabelana oko uYehova ubeke sentliziyweni yakho ngokumalunga noku. ubulungiseleli bakho intsikelelo abaninzi, siyambonga uThixo.
Emmanuella James • EyoMqungu 29, 2017 ngexesha 12:24 pm • impendulo
Onjalo post elithandekayo. Mna fan enkulu kangaka umculo wakho. Loo nto iyandinceda soo kakhulu. Ukufumanisa ukuba zombini webhlogi kunye umbhali engqondweni-makazichaze, ukususela Mna kunye sele efuna ukuba umntu ukuba abheke phezulu. Ngokwenene Akwaba ukufumana ikopi yencwadi yakho.
KenaMuigai • Isilimela 16, 2018 ngexesha 2:11 pm • impendulo
Wowu! umhlobo wam uyayiphulaphula umculo wakho kwaye wandixelela Ndingathanda. Ngokuba ukuba ingqondo yam ophephuka. Wena Ziyaphila, unyanisekile yaye akukho akukho zokubethwa ethetha ngetyholo nawe. Umelwe faka nam kangaka yaye nakuba mna 18 kwaye baziva ngathi ndiza ndawo, kukho inyaniso kangaka – ukuthembeka ekrwada – yaye ekhangele ilizwi likaThixo kuni, ukuba mna aphefumlelweyo kwaye bakhuthazeke ukuba ayeke iqelana nemikhwa emibi. Imma unamathele phezu kwelo themba ukuba kukho into elungileyo eza ingakumbi bengakholwa ukuba 7:00 a.m. logic cuz sikwimeko ngokupheleleyo kwaye yinto ndiya ukusebenza ngomhla. Enkosi!!
P.S. Ukukhangela phambili umculo awesome! :)
ngosuku Uhambo Good.